Dhaqan gelidda xirashada Af-xirka ee Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Dhaqan gelidda xirashada Af-xirka ee Muqdisho
Maamulka Gobolka Benaadir ayaa soo saaray amar ku aaddan qaadashada Af-xirka (Face Mask) oo ay ku sheegeen in la ganaaxi doono qofkii aan xiran, laakiin Su'aallaha la is waydiinayo ayaa ah yaa dhaqan-gelin doono amarkan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Isniintii oo ku beegneed 15 Maarso, ayaa ahayd maalintii uu dhaqan geli lahaa amarkii kasoo baxay xafiiska maamulka Gobolka Benaadir ee ku aadanaa qaadashada Af-xirka (Face Mask) kaasoo maamulku uu ku amray dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho in ay qaataan, qofkii lagu arko isagoo aan xirneyn waxaa lagu ganaaxi doonaa $5.
Haddaba qiimeyn ay Keydmedia Online ku sameysay sida ay dadku ugu hoggaansameen awaamiirta uu soo rogay maamulka Gobolka Benaadir ayaan ku ogaanay in qeybo badan oo kamida bulshada ay qaateen Af-xirka, iyagoo ka cabsi qaba in loo ganaaxo wax caafimaadkooda quseeya, laakiin wali jira dad badan oo amarkaas aan dhag-jalaq u siin, kuwaasoo u arka hadal afka kasoo baxay oo aan la dhaqan-gelin karin.
Mid kamida wadayaasha moota Bajaajta oo la hadlay Wariyaha Keydmedia ee Caasimadda ayaa sheegay inuu jeebka ku haysto Af-xirkiisa, markii uu kusoo dhawaado goobaha ay joogaan ciidamada minishiibiyada oo si kumeel gaara shaqada hubinta xirashada Mask -ga loogu dhiibay ayuu qaataa, waxa uuna noo sheegay inuusan xiran karin, caafimaad ahaana uu dhib ku qabo qaadashada.
"Waxaan xirtaa markii aan kusoo dhawaado ciidanka canshuurta ka qaada Mootooyinka, waxaan kaloo xirtaa markii uu mootada soo raaco qof aan uga shakiyo inuu qabo Covid-19 ama aan arko isagoo Qufacaya!" ayuu yiri wiil dhallinyaro ah oo wade mooto Bajaaj ah.
Waxaa la galay maalintii sadexaad ee lagu wado in la fuliyo amarka maamulka Gobolka Benaadir ee qaadashada Af-xirka (Mask), bulshada ku dhaqa Gobolka Benaadirna waxay ubaahan yihiin waci galin xoog leh.
Wacyi-galinta uu bixin lahaa maamulka Magaaladda ayaa wali maqan, shacabkana wali uma cada khatarta uu leeyahay viruska COVOD-19. Sidoo kale, su'aallaha la is waydiinayo ayaa ah yaa dhaqan-gelin doono amarkan, maadaama jidadka iyo xaafadaha aysan joogin Ciidan dadka ku ilaalinaya xirashadda af-xirka.
Dhanka kale, Af-xirka wuxuu halkii xabo Farmashiga ka joogaa $0.5 oo u dhiganta 12,000 oo Shilin Somaali ah, waxaana adag dadkii dhan inay wada helaan marka la eega xagga dhaqaalaha.
Waxaa weli sii kordhaya kiisaska dadka laga helayo Caabuqa Covid-19 ee waddanka Soomaaliya, xilli uu kusoo laba kacleeyay iyadoo digniino iyo wacyi galin hor leh ay bixinayaan saraakiisha caafimaadka iyo maamulka gobolka Benaadir iyo kan Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegtay inuu aad u kordhay kiisaska COVID-19, waxaana loo malaynayaa inuu dalka soo galay nooca cusub ee Virus-ka oo ka yimid UK iyo South Africa.
Dad gaaraya 326 qof ayuu COVID-19 ku dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii tagey, iyadoo tirada intaasi ka badan karta maadaama Wasaaradda Caafimaadka ay diiwaan geliso oo kaliya dadka ku dhinta Martiini.
Soomaaliya oo mudo 30 sano kusoo jirtay dagaallo iyo dowlad la'aan ayaan haysan adeeg caafimaad oo wanaagsan, oo lacag la'aan ah, iyadoo Isbitaallada gaarka loo leeyahay aysan ku filnayn baahidda dadka.
Golaha Wakiilada Dowlad goboleedka Puntland ayaa qaadacay gabi ahaanba muddo kororsigii 2-da sano ahaa ee ay sameysteen Golaha Sahcabka BJFS iyo madaxweyne Farmaajo